Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » New Acura Integra: Obi ike na Turbo ebubo maka 2023
Site n'ike mmụọ nsọ nke Integras gara aga, gụnyere nke mbụ nyere aka ịmalite akara Acura na 1986, 2023 Integra ga-abụ ihe nlere arụmọrụ ọnụ ụzọ ọhụrụ na ahịrị Acura, egwuregwu egwuregwu dị elu nke nwere imewe ụzọ ise na-akpali akpali yana mmụọ ịnya ụgbọ ala. . Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mbụ-turbocharged Integra ga-akpali ọgbọ ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na-anụ ọkụ n'obi na nnyefe akwụkwọ ntuziaka dị ọsọ isii dị, obere mpempe akwụkwọ dị iche iche na mmepụta 1.5-liter dị elu, yana VTEC® n'ezie.
"Integra bụ otu n'ime ihe ngosi kachasị mma na akụkọ ihe mere eme Acura," Jon Ikeda, onye osote onye isi oche na onye ọrụ Acura Brand kwuru. "Integra ọhụrụ a, ga-aga n'ihu na-ebuga n'ọkwa ahịa pụrụ iche nke mbụ ma nwee ike iru ya, yana arụmọrụ mmetụta uche na ụdị ya, yana ngwa ngwa na uru nke ndị na-azụ ahịa taa na-achọ."
Emebere ya na Japan, ụdị ụdị mpụ siri ike nke Integra ọhụrụ na-egosipụta ahịrị elu ụlọ na-awụdata nke ukwuu na ọnụ ụzọ ọdụ azụ, na-enye ya ọnụnọ ụzọ dị iche iche nke coupe. Nkọwa ọgbara ọhụrụ nke ahịrị Integra, ụdị ọgbọ nke ise na-egosiputa akara ụghalaahịa dị ka aha Integra etinyere n'okpuru ọkụ ihu onye ọkwọ ụgbọ ala na n'akụkụ ndị njem.
Oghere azụ azụ akwara na fascia azụ na-eme ihe ike nwere ndị na-agwụcha agwụcha ọkụ na-emesi nnukwu egwu Integra ike. Site na ụdị Integra gara aga, ụdị ụdị azụ a pụrụ iche na-egosipụta nnukwu ọkụ ọdụdụ nwere otu mbinye aka ọkụ "Chicane" dabara. N'azụ Integra Prototype's matte-finish 19-inch gbawara agbawa-ise wiil kwuru nwere nnukwu breeki Brembo™ dị elu nwere mkpịsị ugodi agba Indy Yellow calipers, na-enye ike nkwụsị na-enweghị atụ na anya ike.